China Composite zu Protruded Fibreglass I-Beam yabucala mveliso kunye nabenzi | IBonai
Siqinisekisa ukuba zonke iimveliso ziphantsi kovavanyo oluninzi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngaphambi kokuba zisiwe.
Ixabiso liyahluka ngokusekwe kwimveliso yokwenziwa kunye nobungakanani beemfuno.
Eyona nto iphambili kwinkampani yethu liqela lethu lesayensi kunye netekhnoloji.
4. Eyona nkonzo igqwesileyo
Yonke imibuzo yakho malunga nathi okanye ngeemveliso zethu, siza kukuphendula ngokweenkcukacha kwisithuba seeyure ezili-12.
5. Ukupakisha kunye nokuhambisa
Iimveliso zinokupakishwa zithunyelwe ngokweemfuno zabathengi.
FAQ malunga zu
Q: Ngaba iipaneli eziQinisekisiweyo zeFayibha zinokufakwa ngaphezulu kweendawana ezininzi?
A: Iiphaneli eziqiniswe ngombala zinokufakwa phantse kuzo zonke iziqwengana. Nangona kunjalo, indlela yokufaka esetyenzisiweyo iya kwahluka ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye.
Umbuzo: Uyifaka njani iFiberglass eqiniswe ngaphezulu kweDrywall?
A: Ewe, i-FRP inokufakwa phantse kuwo onke amaqhekeza ngendlela yofakelo ngomatshini. Nangona kunjalo ukuba ikontraka ifuna ukufaka iiphaneli zeFiberglass eziqinisiweyo zisebenzisa izinto zokuncamathelisa, oko kungenziwa, kufuneka nje usebenzise isinyibilikisi simahla ngaphandle kwendawo enefolokhwe enjengeebhloko zekhonkrithi, i-drywall, iplywood okanye udonga lodaka. Xa ufaka i-FRP ngaphezulu kwezinto ezingenayo indawo, ezinje ngeethayile zodonga, ukusebenzisa isincamathelisi esincamathelayo kunye neerivets kuyacetyiswa, Ukuze ugqibezele ukufakwa okungcono, khumbula ukwenza isanti iithayile ukuze i-FRP ikwazi ukubambelela ngcono.
Q: Ngaba iiphaneli zeFiberglass eziqinisekisiweyo zinokufakwa ngokuthe tyaba eludongeni?
A: Iiphaneli ze-FRP zinobhetyebhetye kangangokuba zinokufakwa tyaba ngokuchasene nodonga. Kodwa khumbula njengayo nayiphi na into yokwakha, iya kuthi yande kwaye ikhontrakthi ngokweemeko zokusingqongileyo apho ibifakwe khona.
Q: Zeziphi izixhobo ezifunekayo ukufaka i-FRP?
A: Ukufakwa kwe-FRP kunokwenziwa ngokusebenzisa: i-blade yesarha entle, i-carbide drill bit, i-trowel ekhuthazwayo yomenzi, kunye ne-laminate roller eya kuthi isetyenziselwe ukuqinisekisa ukubambelela okuphezulu phakathi kwe-FRP kunye nomphezulu apho ufakelwe khona.
Q: I-FRP yenziwa ngobungakanani?
A: Iiphaneli zefiberglass eziqinisiweyo zihlala zenziwe ngeenyawo ezi-4 ngeenyawo zecandelo leenyawo ezisi-8 kunye nezinye izinto zokwakha kunye / okanye ukubumba. Kwizicelo ezincinci kunye nemiphezulu i-FRP inokunqunyulwa kubungakanani bayo ngokusebenzisa isarha yamandla enezinyo elicikizekileyo, iincakuba zekhabhayithi okanye iincakuba zamatye. Iiphaneli ze-FRP kwi-1mm ubukhulu zinobunzima obuyi-1.5kg ngemitha yesikwere nganye.
Q: Sisiphi isisombululo esinokubakho kunye nenkqubo yofakelo ekhawulezayo?
A: Iipaneli eziqinisiweyo ze-fiberglass zinokubonelelwa ngeemakhishithi ezenziwe ngeplywood, i-EPS yokugquma okanye i-drywall. Ngokusebenzisa olu hlobo lwe-FRP, iya kuvumela ukufakwa ngokukhawuleza kwaye iya kuvelisa umphezulu ogudileyo, kuba ishenxisa imfuno yeerivets. Kukwacetyiswa kwakhona ngaphambi kokufaka i-FRP ukususa ukupakisha kweepaneli, kwindawo eza kuthi ifakwe kuyo. I-FRP ngokufanelekileyo iya kuthabatha imeko efanayo yokusingqongileyo kwindawo apho iipaneli ziya kufakelwa khona.
Egqithileyo China Factory Kwenziwe ngentando zu fiberglass nothango for Construction
Okulandelayo: I-FRP Purlin yoKwakha iiNjongo zePurlin Ixabiso
GRP Pultruded Fibreglass Iifomu fiberglass Tube ...
China Factory Elungiselelweyo zu fiberglass nothango ...